Izimpawu zeCeramic nama-Discs For Pump Water Pump China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Discs > Izimpawu zeCeramic nama-Discs For Pump Water Pump
Izigxobo ze-Ceramic ne-discs yepompo yamanzi yezimoto zinomsebenzi ovelele wezobuchwepheshe uma kuqhathaniswa nezingxenye zokufaka uphawu zendabuko (njenge-PTFE, steel, carbon). Ikakhulukazi, ukumelana nama-mechanical wear (i-ceramic ingaphezu kwezikhathi ezinhlanu kunezinye izindlela). Futhi, izigxobo ze-ceramic ne-discs azifani nokumelana nokushisa. Ngaphandle kwalokho, ukulingana okuphansi kwe-coefficient kuthuthukisa impilo yokusebenza okuningi futhi kunciphise izindleko zokugcina.
Kungani ukhetha iziqu ze- alumina ze- Ceramic nama-disc ?
3.High resistance corrosion in fluids kanye valve yokulawula pneumatic;